Thenga i-Bitcoin nge Google Pay- Gold Locker (MMTC-PAMP) | Paxful
Thenga i-Bitcoin (BTC) nge Google Pay- Gold Locker (MMTC-PAMP)
U-Paxful ukwenza kube lula kwaye kukhuseleke ukuba uthenge nokuba ube nekhriptokharensi. Fumana elona xabiso ligqibeleleyo apha ngezantsi uze uthenge ikhriptokharensi nge Google Pay- Gold Locker (MMTC-PAMP) namhlanje.
Ixabiso le-Bitcoin nganye
Indlela Yokuthenga i-Bitcoin ku-Paxful
Apha kwa-Paxful, injongo yethu kukwenza iinkonzo zemali zifikeleleke kwiimiliyoni zabantu ehlabathini jikelele. Sifuna ukunika abantu ithuba lokusebenzisa imali nanini na bebona kuyimfuneko baze babuphucule ngokuphawulekayo ubomi babo bemihla ngemihla.
Iplatfomu yethu isebenzisa umgaqo wezimali womhlobo kumhlobo, eyenza ukwazi ukuthenga i-Bitcoin ngqo kwabanye abasebenzisi abafana nawe, ngaphandle kokubandakanya iibhanki okanye ezoshishino. Uza kuba yinxalenye yabasebenzisi abangaphezu kweemiliyoni ezintathu, abaye bonke beza kuthi benenjongo yokufuna ukukwazi ukulawula iimali zabo.
Ukuthenga ikhriptho ku-Paxful kulula; vele ulandele la manyathelo alandelayo:
Bhalisa – Yenza iakhawunti kwaye uza kuvele ufumane iwalethi yakho yasimahla ye-Bitcoin.
Khangela ixabiso – Wakubanayo iakhawunti, khetha indlela yokubhatala, ixabiso le-Bitcoin ofuna ukulithenga kunye nekharensi oyikhethayo, uze ucofe ku Khangela Ixabiso. Bhrawuza kuluhlu lwamaxabiso akhoyo, khetha elona lihambisana kakuhle neemfuno zakho, uze uhlole imimiselo yomthengisi.
Qalisa urhwebo – Ukuba wanelisekile yimimiselo yomthengisi, faka ixabiso le-Bitcoin ofuna ukulithenga, uze uqalise ukurhweba. Oku kuza kuvulela incoko yangoku kunye nomthengisi. Landela imiyalelo yomthengisi ukuze wenze intlawulo uze uyiqinisekise.
Fumana i-Bitcoin – Umthengisi uza kwandula akhulule i-Bitcoin iye ngqo kwiwalethi yakho yakwa-Paxful.
Ungabukela nevidiyo yethu eneenkcukacha ebonisa indlela yokuthenga i-Bitcoin ngoko nangoko.
Emva kokulugqiba ngempumelelo urhwebo, ungayithumela okanye uyisebenzise i-Bitcoin kuyo nayiphi iwalethi okanye isevisi ngokusuka ngqo kwiwalethi yakho yakwa-Paxful.
Ngeendlela zokubhatala ezikhoyo ezingaphezu kwe-300, ukuthenga i-Bitcoin kwi-intanethi zange kwalula ngolu hlobo. Ukusuka kwimali uqobo nodluliselo-mali lwebhanki ukuya kumakhadi esipho kunye nee-app zokubhatala, ungazikhethela olona khetho lukufaneleyo. Ukuba awuyiboni indlela yokubhatala oyikhethayo, sixelele kwaye siza kuzama ngako konke okusemandleni ukuba ibekho.
Rhweba ngokukhawuleza, ngokukhuselekileyo, kwaye ukhuseleke kwiplatfomu ye-Bitcoin yomhlobo kumhlobo yakwa-Paxful. Qalisa namhlanje!